रमाइलो चुट्किला : फेसबुक चलाएर के फाइदा ? - Everest Dainik - News from Nepal
रमाइलो चुट्किला : फेसबुक चलाएर के फाइदा ?
(बाबु छोरलाई सम्झाउँदै)
बाबु : हेर छोरा, यो फेसबुक चलाउन छोडदे । यस्ले तँलाई खाना दिँदैन ।
छोरा : किन पीर गर्छौ बा ! फेसबुकले खाना नदिएपनि खाना पकाएर दिने मान्छे दिन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु ।
याे पनि पढ्नुस रमाइलो चुट्किलाः यस्तो छ भिखारीको माग्ने तरिका